कामवासना - यो पापी अवस्थाको छ। राय अर्थोडक्स pastors
गर्छन् गरेको मण्डली Slavonic शब्द "कामवासना" थाह प्राप्त, हामी के अर्थ सिक्न। धेरै अप्रचलित शब्द समकालीनहरूको भ्रामक छन्। कामवासना - खुशी को लागि मानिसको प्रेम छ। पापी: रूपमा र अर्थोडक्स चर्च लेख्छन् भन्छन् मानसिक अवस्था।
यो कस्तो अर्थ राख्छ?
यो कि व्यक्ति, आनन्द उठाउन सक्छौं मजा र माग छ संग कुराकानी सुरु गर्न उचित छ। यो यस्तो कार्य जन्म कामवासना छ हो। बस स्वार्थ को एक शाखा छ, राखे। किन?
यहाँ पहिलो उदाहरण हो। एक सुडौल आकार, तर कलिलो र प्यारा अनुहार संग महिलाहरु जस्तै मानिसहरू। उहाँले एक उपयुक्त प्रेमिका छनोट, तिनीहरूलाई ताक। त्यसपछि उहाँले admires, यो उठाउँछ।
दोस्रो उदाहरण त्यहाँ गरौं सबै आकर्षक प्रेम हुन। मानिस, रोचक खेल खेल्न चलचित्र हेर्न, स्वादिष्ट केक र मिठाई किन्न रुचि। त्यो छ, उहाँले उठाउँछ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, हामीले पहिले नै दोस्रो समय क्रिया उल्लेख छ। र यो कुनै संयोग छ। कामवासना - यो खुशी को लागि इच्छा छ।
किन चर्च कामवासना विरुद्ध छ?
को अर्थोडक्स चर्च कामवासना पाप हो सधैं छ। यो कुनै संयोग छ। स्वर्ग वा नर्क: पहिलो स्थानमा मानिस, त्यो बाटो रोज्ने। पृथ्वीमा जीवन दिन्छ भनी सबै रमाइलो गर्न मन गर्नेहरूले खाडलमा पर्नु, र यो छ जो दुष्ट को सजाय, undergo, र जीवन संग आकर्षण होमियो। यो कामवासना कस्तो अर्थ राख्छ? परमेश्वरको Renunciation।
यो सिर्फ एक परी कथा थियो भने, लगभग 2,000 वर्ष अभ्यास छ कि कुनै स्वीकार त्यहाँ हुनेछ। खुशी प्रेम, विशेष तेज दिन इच्छुक छ मानिस, म एक पुजारी गर्न स्वीकार, र मन्दिरमा येशूको छवि अघि हुनुपर्छ।
हामी एक सानो बुझे के voluptuousness छन्। अब पवित्र मानिसहरूको जीवन एउटा उदाहरण हेरौं: तिनीहरूलाई थुप्रै कुनै पनि रूप मा खुशी shunned। तपाईं सूची पनि गर्न सक्नुहुन्छ:
मानव को सौन्दर्य आनन्द छैन;
तिनीहरूले सुविधा ल्याउन भनेर कुरा कुनै पनि प्रकारको छ कोसिस गरेनन्;
को खुशी को लागि स्वादिष्ट भोजन प्रयोग गरेनन्;
हामी सान्त्वना, मजा, आनन्द आवश्यकता थिएन।
को सन्तहरू गरिब थिए वा गरिब थिए कसरी सन्तहरू को ज्यान को उदाहरण को असीमित संख्या पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। खाद्य रोटी एउटा सानो टुक्रा र सादा पानी मग, उदाहरणका लागि, अभाव र सरल थियो। खुशी तिनीहरूलाई यस मामला मा, परमेश्वरले, abstinence लागि इनाम, प्रार्थना रूपमा दिइएको थियो।
के sensualist महसुस?
मानिसको पापले विपरीत, यो मनमोहक मोजमस्ती सधैंभरि हुनेछ। साथै, सन्तुष्टि र प्राप्त गर्न सक्दैन। र मेरो हृदयको आनन्द कहिल्यै हुनेछ। कामवासना - यो एक तल बिना सुन्दर पकवान एक प्रकारको छ। सुन्दर पक्ष पोत, र कुनै लाभ प्रशंसा।
नयाँ ठाउँमा जो सो सक्दैन? नियम, एक को कोमलता, स्नेह, आराम प्रेम गर्ने रूपमा। लाड प्यार शरीर मोजमस्ती आवश्यक छ। दुर्भाग्यवश, आधुनिक संसारमा मान्छे आराम बाँच्न सक्छ भनेर डिजाइन गरिएको छ। विज्ञापन अर्डर सामान बेच्न राखिएको छ, र दुष्ट एक (शैतान) विज्ञापन मार्फत मानव प्राण प्रयोग गर्दछ। चर्च pastors पवित्र बारेमा आधुनिक संसारको प्रलोभन भने, यो बारेमा चेतावनी दिनुहोस्। तर इच्छुक धेरै केही मानिसहरू खुशी साथ भागमा।
पारिवारिक जीवन बारे
शब्द विवाहमा "कामवासना", विशेष गरी चर्च, समान, हामी माथि छलफल जो परमेश्वर, संसार मा जस्तै को अर्थ। यो विवाह आनन्दको को प्रयोजन को लागि प्रविष्ट गर्न आवश्यक छैन, कि तर पूर्ण बिभिन्न कारण बाहिर जान्छ। को अर्थोडक्स चर्च मा विवाह - नकारात्मक पक्ष एक प्रेम एक मान्नु गर्न सक्षम हुन, के कसम छैन, तल bogged प्राप्त छैन, त्यत्तिकै क्षमता छ। र, को पाठ्यक्रम, क्षमा र प्रेम। तर हामीलाई हाम्रो विषय फर्कन गरौं।
पारिवारिक जीवन मा, कामवासना - आनन्द प्रत्येक अन्य सामान्यतया घनिष्ठताका समयमा छ। सँगै धेरै सानो समय थियो भने Pastors, जवान साइन इन गर्न हतार छैन सल्लाह गर्दै छन्, र बस उपस्थिति प्रत्येक अन्य जस्तै। पछि ढिलो होस् वा चाँडो रोक्न सक्छ विवाह रमाइरहनुभएको। अक्सर divorces किनभने यो आउँदैन।
निश्कर्षमा केही शब्द
यहाँ हामी तपाईंलाई साथ हो, र शब्द "कामवासना" देख्यो। खैर, आजको मसीहीहरूले अक्सर अप्रचलित शब्द बारे भ्रमित छन्। को "पापी कामवासना मा" पुजारी भन्न सक्छौं Confessional, छैन शब्द को धेरै समझ छ। तपाईँले निर्दिष्ट गर्न सक्षम हुनुपर्छ, तर उदाहरणका लागि, कामवासना द्वारा पापी implies जो विस्तार, मा वर्णन छैन:
पोस्ट मा मनपर्ने पिज्जा र आइसक्रिम खाए;
घर आफूलाई स्थिति लागि सहज बनाएको;
म संगीत सबै दिन आनन्द;
म रमाइलो को लागि केटी फेला परेन।
सटीक हुन, एक पाप अर्को जोडिएको छ। कामवासना - परिवर्तन गर्न भनेर स्वार्थ र खुशी र नचाहनु।
अंग्रेजी मा खानपान इच्छा
मानिसहरूको जीवनमा शब्दहरूको भूमिका। संचार को एक माध्यम रूपमा शब्द
अर्थ विज्ञान - विज्ञान, यो unimaginably गाह्रो छ जो बिना एक भाषा सिक्न
मा रूसी ट्रान्सलिटेरेशन आधारभूत नियम
रूसी भाषामा सहभागिता कस्तो छ।
कुम्मैत - शब्द मा जोर। कसरी यसलाई सही राख्न?
"Dzhek Rayan: अस्तव्यस्त सिद्धान्त" - केनेथ Branagh द्वारा निर्देशित जासूस रोमाञ्चक
Samsung नोटबुक खोल्ने र सफा कसरी? सैमसंग ल्याप्टप विशेषताहरु
द्वितीय विश्व युद्ध मा जापान
प्रिय सपना देख्यो के थाहा
कसरी एक वयस्क गर्न प्रतिरक्षा वृद्धि गर्न?
अनुकूलता क्यान्सर र मीन
जब विश्व टीबी दिन?
आधुनिक विज्ञान मा Empirical अनुसन्धान विधि।
Angelina Bazan र उनको प्रतिष्ठित विद्यालय मैनीक्योर
क्रिसमस carols के हो? अनुष्ठान carols
रुसीहरूको लागि आयरल्याण्डमा कार्य: विशेषताहरू, विकल्पहरू र सिफारिसहरू
लियोनार्ड रे: "चिनी" को एक स्वाद संग सफलता